के साँच्चै बाँदर आधुनिक मानिसकाे पुर्खा नै हो त ? – Dullu Khabar
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार २३:४९
हामी मानवको अहिलेको पुर्खालाई विज्ञानको भाषामा होमो स्यापियन्स भनिन्छ । यो प्रजाति भने १ लाख ६० हजार वर्षभन्दा बढी पुरानो छैन । अहिलेसम्म भेटिएको सबभन्दा पुरानो होमो स्यापियन्स (होमो स्यापियन्स इडाल्टु) को जीवावशेष १ लाख ६० हजार वर्ष पुरानो रहेको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । (हेर्नुहोस् : en.wikipedia.org › wiki › Archaic_humans) आरपिडेकस रामिडसदेखि होमो स्यापियन्ससम्मको उद्विकासको यात्रामा अन्य थुप्रै प्रकारका मानव पुर्खाहरु रहेका छन् । तिनीहरुमा सुरुका अष्ट्रलोपिथेकस प्रजातिहरु, होमो रोबुटस, होमो इरेक्टस आदि पर्दछन् । पछिल्लो हामी होमो स्यापियन्स मानव प्रजाति होमो इरेक्टस प्रजातिबाट उद्विकास भएको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । त्यसैले मानव जातिको करोड वर्षभन्दा अगाडिको समयको पुर्खा र अपुच्छ बाँदर, त्यसमा पनि खासगरी चिम्पाञ्जीको पुर्खा एउटै भएको साँचो हो, तर मानवको पुर्खा नै चाहिँ चिम्पाञ्जी बाँदर होइन । ratopati
(विज्ञानका विविधि विषयहरुमा केन्द्रीत रहेर अध्येता, विज्ञान लेखक एवं पत्रकार तुल्सीदास महर्जनले लेख्नुभएको लेख .
Tags: विज्ञान विमर्श